Halbeegyada lagu qiimeeyo qofka doonaya kursi | XORRIYA NEWS
Home Fikrado Halbeegyada lagu qiimeeyo qofka doonaya kursi
Siyaasaddu waa cilmi u baahan barasho iyo waaya aragnimo la xiriirta u adeegida bulshada.
Siyaasadu waa Mabda, Aragti iyo Akhlaaq ku dhisan qiyam, masuuliyad, xil-kasnimo iyo tayo hogaamineed oo heer-keedu sarreeyo.
Ujeedka siyaasadu waa maareynta nolosha guud ee Aadanaha si uu Qof-kastaa u gaaro yoolkiisa nololeed, Bulshaduna ugu wada noolaato cadaalad, nabad, horumar, iskaashi iyo barwaaqo.
Siyaasadu ma ahan shaqo shaqsi keligiis ku xamaasho ee waa shaqo shacabka oo dhan loogu adeego. sidaas daraadeed waxaa lagama maarmaan ah in shuruudo lagu xiro qofka doonaya inuu metelo shacabka iyo degaan doorashadiisa.
Sida qofku marka uu shaqo doonayo shirkadaha gaarka ahi ugu xiraan shuruudo laga rabo inuu buuxiyo si aysan hadhow ugu guuldarraysan xulashadiisa.
Halbeegyada lagu qiimeynayo qofka doonaya kursiga matalaada shacabka waa ineysan noqon; dhaqaalaha uu wato, qabiilkiisa iyo cidda hor boodeysa, ee waa in lagu qiimeeyaa Aqoontiisa, Kartidiisa, Khibradiisa hogaamineed iyo guud ahaan waxqabadkiisii hore.
Si la mid ah Aragtidiisa siyaasadeed iyo Qorshaha waxqabad ee uu doonayo inuu ugu adeego dadkiisa iyo degaankiisa.
Ka mid noqoshaha Ergada dooraneysa Xildhibaanada la mid ma ahan, ka mid noqoshaha Siminaar waqti kooban soconaya oo habeen dhax iyo dheef cayiman laga qaadanayo ee waa kala doorashada Mustaqbalkaaga iyo Dib u dhacaaga.
Waa kala doorashada degaankaagu sida uu maanta yahay iyo sida aad rabto inuu noqdo 4-ta sano ee soo socata, waa kala doorashada inaad hesho xildhibaan ku matala oo kuu qareema kuuna maqan iyo xildhibaan ku matala oo kaa maqan kuna ogeyn.
Waa kala doorashada Madaxwayne Dalka iyo Dadka aan dan ka lahayn iyo Madaxwayne Soomaaliya gaarsiiya maqaamka iyo meesha ay istaahisho.
Qorre: Muhamed Mahad